Nanana ny akony ity tononkiran-dRamora Favori ity : « Tetik’asan’ny filoham-pirenena, vidin’ny vary tsy maintsy hahena (…). Raha resaka Jirama, ho ataoko ny remboursemà (…). Demi-tour de vita, Ramora ihany ny anay….. ». Ary ny ho tohiny ?
Tononkira somary mananihany, mifanaraka amin’izay koa ny rindran-tsary mandrafitra ny « Demi-tour de vita », saingy mitondra sy mampita hevitra mafonja sy mifanaraka tsara amin’ny zava-misy atsy ho atsy, eto amin’ny firenena. Fotoana hanatanterahana ny fampielezan-kevitra. Hotanterahan-dRamora Favori tokoa ve ity nofinofiny hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena ity ? Andrasana izay ambarany satria milaza ny hanao fanambarana goavana ny lehilahy, ato ho ato.
Tononkira noforonin-dRamora Favori efa eny ambavan’ny maro, amin’izao fotoana. Tsy eto Madagasikara ihany anefa no malaza io vazo io fa hatrany ampitan-dranomasina mihitsy. Azo ambara fa nitondra avo an-dRamora manerantany izy io, satria vokatr’ilay rindran-tsary, nanao fandaharana manokana ho azy ny televizona vahiny, ny TV5 Monde.
Raha hiverenana ny mombamomba ity rindran-tsary ity, voalaza fa teo ho eo amin’ny 5 tapitrisa ariary ny lany tamin’ny fandrafetana azy. Naharitra tapa-bolana ny fakana ny sary izay notanterahana teny Ivato Tsena, Complexe Ampefiloha ary Ambohipo. Nahatratra 300 tany ho any ny mpandray anjara namelona ny rindran-tsary. Anetsiny ny mpanaraka ity rindran-tsary « Demi-tour de vita » ity amin’ireo rohy voalaza ireo.
Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa mahafehy ny filàn’ny sarambabembahoaka malagasy ny voalaza ao anatin’ny rindran-tsary ka tafita vetivety sy nahasarika ny sofina ary ny mason’ny mpijery ny nanaraka izany… Andrasan’ny olona fatratra ihany koa ilay fanambarana ataon-dRamora, atsy ho atsy !